Shiinaha Alloyed galvanized sheet steel soo saaridda iyo Warshad | Samatabbixin
Alloyed sheet steel galvanized
Codsiga: Qalabka mashiinka saxda ah
Badeecada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo habka diirinta kulul, laakiin ka dib markay taangiga ka baxdo, isla markiiba waa la kululeeyaa ilaa 500 ℃ si loo sameeyo filimaan dhuuban oo zinc iyo bir ah. Xaashidan galvanized waxay leedahay cidhiidhi daahan oo wanaagsan iyo alxanka.
Khadadka waxsoosaarka galvanized iyadoo la adeegsanayo habka ugu horumarsan ee wax soo saarka birta Mareykanka, qeexitaanada ugu muhiimsan ee sheyga waa 0.15-1.5mm * 800 ~ 1250mm. Khadka wax soo saarka waxaa lagu qalabeeyaa shucaaca foornada annealing ee joogtada ah; kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ee kuleylka kuleylka dhoobada dhoobada; afar mindi hawo ah; mashiinka iftiinka; Mashiinka toosiya iyo qalabka kale ee horumarsan, Waxaan ku hormarnay teknoolojiyadda shatiga leh: aaladda ka faa'iideysiga kuleylka qashinka, oo keydin doonta tamar badan isla markaana ilaalin doonta deegaanka
Lakabka dahaarka zinc iyo birta ayaa lagu sameeyay daaha oo dhan iyadoo lagu daaweynayo kuleylka mashiinka birta ee marinaya dareeraha qubeyska. Dahaadhku wuxuu umuuqdaa cawl madow oo aan lahayn dhalaal bir ah. Way fududahay in la boodboodo inta lagu gudajiro hawsha wax dhisidda rabshadaha leh. Waxay ku habboon tahay dusha sare ee la rinjiyeyn karo iyadoon daaweyn dheeri ah laga helin marka laga reebo nadiifinta guud.
Darajada birta qaabdhismeedka qaabaysan waxaa matalaya lambarrada Carabiga iyo astaamaha walxaha kiimikada caadiga ah. Laba lambar oo Carabi ah ayaa loo isticmaalaa inay metelaan celceliska kaarboonku ka kooban yahay (x / 10000) oo la dhigo madaxa fasalka. The
Waxyaabaha ay ka kooban tahay walxaha laysku daro ayaa loo matalayaa sida soo socota: Marka celceliska cabirka ka yar yahay 1.50%, nambarka darajada ayaa kaliya tilmaamaya curiyaha guud ahaanna ma tilmaamayo waxa ku jira; Marka celceliska waxyaabaha ay yihiin 1.50% ～ 2.49%, 2.50% ～ 3.49%, 3.50% ～ 4.49%, 4.50% ～ 5.49%, 2, 3, 4 iyo 5 ayaa la qoraa iyadoo la raacayo walxaha iskujira. Tusaale ahaan: Qiyaasta celceliska kaarboon, chromium, manganese iyo silikoon ee birta isku dhafan ee dhismeedka ah waa 0.30%, 0.95%, 0.85% iyo 1.05%. Marka waxyaabaha S iyo P ay yihiin -0.035%, buundada ayaa tilmaamaysa "30CrMnSi". Tayada sare ee aluminium daawaha qaabaysan (S iyo P ka kooban ≤0.025%) ayaa lagu muujiyey iyada oo "A" lagu darayo darajada. Tusaale ahaan: "30CrMnSiA". Tayada sare ee birta daawaha ah ee qaab-dhismeedka (S≤0.015%, P≤0.025%) ayaa lagu muujiyay iyadoo lagu darayo "E" darajada. Tusaale ahaan: "30CrM nSiE". Darajada birta daawaha ah ee qaabdhismeedka qaaska ah waa inuu ku daraa astaamaha tilmaamaya ujeeddada wax soo saarka ee Jadwalka 1 ilaa madaxa darajada (ama dabada). Tusaale ahaan, darajada 30CrMnSi steel ee qashin furka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ML30CrMnSi. 2. Habka matalaada ee dahaarka birta guga alloy wuxuu la mid yahay birta qaabeynta qaabdhismeedka. Tusaale ahaan: Qiyaasta celceliska kaarboon, silikoon iyo manganese waa 0.60%, 1.75% iyo 0.75% birta guga darajadeedana waxaa loo metelaa "60Si2Mn". Birta guga ee tayada sare leh, calaamadda "A" ayaa lagu darayaa darajada darajadana waxaa loo matalayaa "60Si2MnA".
Hore: Dhex Hot Hot saxan galvanized
Xiga: Noocyada daahan-PE